Best Testosterone (Uvavanyo) ipowder Factory factory
I-AASraw inikezela ngeentlobo ze-testosterone esters powder kunye nokubonelela okuzinzile, sinokuthumela i-anabolic steroid eluhlaza kuwo wonke umhlaba, ngakumbi e-USA, eYurophu, inkonzo ye-imeyile isebenza kakuhle kwaye luhlobo lokuhanjiswa kwekhaya, lukhuselekile kakhulu. Ukongeza, umyalelo omkhulu unokuxhaswa ngexabiso elikhuphisanayo.
Thenga i-Testosterone Powder
Testosterone Undec Powder (5949-44-0)-COA
Testosterone PP Powder (1255-49-8)-COA
Test Prop Powder (57-85-2)-COA
Uvavanyo lwe-E Powder (315-37-7)-COA
Uvavanyo lwe-Deca Powder (5721-91-5)-COA
Test Cyp Powder (58-20-8)-COA
Uvavanyo lwe-Iso Powder (15262-86-9)-COA
1. Testosterone kunye neMbali yoKwakha uMzimba
2. Yintoni iTestosterone kwaye Iveliswa njani?
3. Ziziphi iiNqanaba zeTestosterone eziphilileyo?
4. Ngaba iSteroids kunye neTestosterone Yinto efanayo?
5. Ngubani ofuna unyango lweTestosterone?
6. Kutheni i-Bodybuilders ikhetha ii-Testosterone Injections?
7. Ziziphi ii-Esters eziqhelekileyo ze-Testosterone ye-Injection?
8. Indlela yokufumana i-Ester ye-Testosterone engcono kakhulu yokwakha umzimba?
Iyintoni indima yee-Esters ezahlukeneyo ze-Testosterone ekwakhiweni koMzimba?
I-Testosterone yi-hormone ye-steroid eyenzeka ngokwemvelo emzimbeni womntu. I-hormone ye-testosterone iyadingeka kuphuhliso lwe-physiological yomzimba wesilisa kwaye ineminye imisebenzi emininzi, ebangele ukusetyenziswa kwayo njenge-anabolic steroid ngabakhi bomzimba kunye nabadlali.
I-Testosterone yi-hormone ye-steroid emzimbeni womntu kunye nobudala, inqanaba le testosterone emzimbeni liqala ukuhla. Oku kuncipha kukhatshwa ziziphumo ebezingalindelekanga ezininzi, ezinjengokulahleka kweenwele, ukuncipha kobunzima bemisipha, kunye nokuncipha ngokubanzi kokuqina kwengqondo nomzimba. Ihomoni ye-Testosterone steroid ibalulekile kwezi zisemzimbeni, kwaye oko kuqonda kanye oko kwakhokelela ekusetyenzisweni kwe testosterone yangaphandle njengonyango lwe testosterone kwindawo yokuqala.
Ngo-1899, uGqr. Brown-Sequard wavelisa i-Elixir of Life yamadoda eyayenziwe ngegazi, amadlozi, kunye nolwelo lwamatyhalarha olwaluthatyathwe ezinjeni nakwiihagu. Oku kunokubonakala kungaqhelekanga xa kujongwa inkqubela phambili kwezonyango namhlanje kodwa emva phayaa ngo-1899, oku kwakufumaniseka okothusayo. Ugqirha uBrown-Sequard wavavanya le ngqungquthela kuye, ephawula ukuphucuka okuphawulekayo kwimpilo yakhe yonke kunye namandla. Njengoko ilizwi likaDkt Brown-Sequard impumelelo kunye ne-testosterone-based elixir yezilwanyana yasasazeka, oogqirha abaninzi baqala ukusebenzisa i-elixir. Ekugqibeleni, yamiselwa ngoogqirha abangaphezu kwe-12,000, ngenxa yoko, ivula indlela yokusetyenziswa kwe testosterone.
Ngoxa i-concoction kaDkt Brown-Sequard iphumelele ngenxa yemiphumo ye-testosterone steroid hormone, i-testosterone yangempela yokwenziwa ayizange iphuhliswe kude kube yi-1935, eJamani. Olona setyenziso luphambili lwale testosterone yokwenziwa yayikukunyanga ukudakumba kwaye yiloo nto eyayisetyenziselwa yona, ukuya kuthi ga kwi-Olimpiki ye-1954. Isizathu esiyintloko sokusetyenziswa kakubi asikwaziwa kodwa kwakukho kwii-Olimpiki ze-1954 ukuba iimbaleki zaqala ukusebenzisa kakubi i-testosterone njenge-anabolic steroid, ekusebenzeni komzimba okungcono.
Nangona ukusetyenziswa kakubi kwe-synthetic testosterone kwaqala ngo-1954, kwakulinganiselwe kwiimbaleki kude kube ngowe-1980 xa ukusetyenziswa kwe testosterone njenge-anabolic steroid kwasasazeka kubemi ngokubanzi. Ngeli xesha, kwaye kude kube mva nje, ukusetyenziswa kwe testosterone ubukhulu becala ngamadoda angengawo iimbaleki ngokubonakala kwawo, endaweni yokusebenza kwawo ngokwasemzimbeni. Uluntu ngokubanzi lusebenzisa i-testosterone okanye i-steroids ukuphucula ubunzima bemisipha yabo, kwaye ibonakale ininzi kwaye inkulu kunokuba iqhube kakuhle kwimidlalo.
Uluntu ngokubanzi luqaphele ukuphucuka okubonakalayo ekusebenzeni kwabo komzimba kunye ne-testosterone yangaphandle. Baye bafumana ukuphuculwa kobunzima bemisipha, kunye nokuncipha kobuhlungu bemisipha emva kokusebenza kunye nexesha eliphuculweyo lokubuyisela. Zonke ezi zibonelelo zikhokelela ekusetyenzisweni okwandisiweyo kwe testosterone njenge-anabolic steroid ngabadlali kunye nabakhi bomzimba.
Ukusetyenziswa okwandisiweyo kwe testosterone yangaphandle kubangele ukuba iCongress ipapashe i-Anabolic Steroid Act ye-1990 echonge i-anabolic steroids njengeklasi yeziyobisi eyabo kwaye ifakwe kuluhlu lwezinto ezilawulwayo.
I-Testosterone yi-hormone ye-steroid efumaneka kuzo zombini, amadoda kunye nabasetyhini abanamazinga aphezulu kumadoda, kunabasetyhini. I-hormone yesini eyindoda ejongene nokuphuhliswa kweempawu zesini zesini. Iveliswe ngokuyintloko kwii-testes, le hormone ye-steroid yenziwe kwi-cholesterol. Eyona umthombo we testosterone emadodeni nasetyhini yahlukile njengoko abasetyhini bahlala bexhomekeke kwi-adrenal glands kunye ne-peripheral tissue ye-testosterone synthesis ngelixa isenziwa ikakhulu ngamastess emadodeni.
I-synthesis ye-testosterone, i-steroid evela kwiqela le-androstane, ixhomekeke kwi-cholesterol kunye nomsebenzi weeseli ze-Leydig kwii-testes. Yakuba idityanisiwe, ithwalwa egazini yi-sex-hormone-binding globulin (SHBG) kwaye emva kokuba isetyenzisiwe, ithuthelwa esibindini ukuze yahlulwe ibe ziimetabolites zayo ezingasebenziyo.
Umndilili oyindoda ophilileyo kufuneka abe namanqanaba e testosterone kuluhlu lwe-264 ng/dl ukuya kwi-916 ng/dl. Olu luhlu lusebenza kuphela kumadoda angatyebileyo kwisithuba seminyaka eyi-19 ukuya kwengama-39 ubudala, kwaye amanqanaba aphakathi e-testosterone angama-630 ng/dl. Ngaphandle koku, kuphela ipesenti ze-25 kuphela i-testosterone esebenzayo kwaye malunga neepesenti ze-2 ukuya kwiipesenti ze-3 i-testosterone yamahhala.
I-Testosterone ilinganiswa ngokusebenzisa indlela ye-Vermeulen eguquliweyo, apho kuphela i-testosterone ebophelelwe kwi-SHBG ilinganiswa. Ikwalinganisa i-testosterone ebotshelelwe ngokubuthathaka kwi-albumin egazini kodwa ayilinganisi i-testosterone yamahhala.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba olu luhlu lwereferensi lwamanqanaba e testosterone luye lwaphikiswa ixesha elide ngoogqirha, kunye nezikhalazo eziphambili kunye nesiphelo esisezantsi soluhlu. Oogqirha bakholelwa ukuba i-294 ng / dl iphantsi kakhulu kwaye ibhekisela kwi-hypogonadism okanye amanqanaba aphantsi e-testosterone, kunokuba ixabiso eliqhelekileyo. Endaweni yoko, bacebisa ukusetyenziswa kwe-350 ng/dl njengexabiso elisezantsi lokunqunyulwa ukwenza uluhlu lwereferensi luchaneke ngakumbi. Nangona kunjalo, eli asiloxabiso elisikiweyo elamkelekileyo ngokubanzi kwaye ukunqunyulwa okusemthethweni okusemthethweni kusahleli kungama-294 ng/dl nangona ezinye izibhedlele zabucala zinokuthatha i-350 ng/dl njengokupheliswa kwazo.
Omnye umba omawuqwalaselwe ekujongeni amanqanaba e testosterone kukuba ihomoni ye-steroid iguquguquka yonke imini, oku kuthetha ukuba kunokwenzeka ukuba amaxabiso alinganiswe kusasa aya kwahluka kakhulu kunamaxabiso alinganiswe ngokuhlwa. Amaxabiso kusasa aphezulu kakhulu njengoko amanqanaba e testosterone ehla yonke imini.
Amanqanaba e-Testosterone nawo axhomekeke ekukhutshweni kwehomoni ekhupha i-gonadotropin (GnRH) yona ngokwayo ekhutshwa ngesingqi, ngokomndilili, qho kwiiyure ezimbalwa. Oku kunokubalelwa ngokuguquguquka kumanqanaba e testosterone imini yonke.
I-Testosterone kunye ne-steroids azikho izinto ezifanayo nangona, zinezakhono ezifanayo, ukuya kwinqanaba. Kubalulekile ukukhangela ukuba yeyiphi i-anabolic steroids ngaphambi kokuyithelekisa ne testosterone.
I-Anabolic-androgenic steroids ngamacandelo ahlukeneyo anefuthe elifanayo ne-hormone yesini yendalo, i-testosterone. Enyanisweni, ziindlela zokwenziwa ze testosterone. I-Anabolic steroids ingaba yi-testosterone esters, i-testosterone precursors, okanye ezinye iindlela ze-testosterone, zinikwe ukuba zonke zisebenza ngokufana ne-hormone yendalo.
Kubalulekile ukuqaphela ukuba i-anabolic steroids yahlukile kune-corticosteroids efana ne-prednisone esetyenziselwa unyango lwezifo ezithile zonyango. I-Anabolic steroids idla ngokumiselwa ngoogqirha nge-testosterone ephantsi, njengoko isebenza ngokufanayo. Nangona kunjalo, ezi ntlobo ze-steroids nazo zixhaphazwa ngokuqhelekileyo kwaye zisetyenziswe kakubi ngabadlali kunye nabakhi bomzimba ukunyusa ngokukhawuleza ubunzima bemisipha.
I-Anabolic steroids ibophelela kwi-androgen receptor kwingqondo. I-Testosterone ibophelela kule receptor ngokuqhelekileyo ukuvelisa iziphumo zayo, ngoko ke, ichaza amandla e-anabolic steroids ukwenza ngendlela efana ne-testosterone. I-Anabolic steroids ifumaneka kuluhlu olubanzi lweefom ezifana neenaliti, iipilisi, iipellets ezifakelweyo, iigels, kunye ne-creams. Ngokufanayo, kukho ezininzi iintlobo ezahlukeneyo ze-anabolic steroids, zonke ezisetyenziselwa ukunyanga izifo zonyango ezinxulumene namanqanaba aphantsi e-testosterone.
I-Testosterone yihomoni yesini eyindoda eveliswa ngokwemvelo emzimbeni. I-testosterone esters, eyi-esters ye-testosterone yendalo okanye i-synthetic testosterones zezona zisetyenziswa rhoqo i-anabolic steroids kunyango lwamanqanaba aphantsi e-testosterone. Imizekelo ye-testosterone esters ibandakanya i-testosterone enanthate, i-testosterone cypionate, i-testosterone propionate, i-testosterone Sustanon 250, i-testosterone phenylpropionate, i-testosterone decanoate, i-testosterone isocaproate, kunye ne-testosterone undecanoate.
Isizathu esisemva kokusetyenziswa ngokubanzi kwe-testosterone esters njenge-anabolic steroid kukuba inkqubo ye-esterification yenza i-anabolic steroid ifumaneke ngakumbi ngokwenza i-hormone yangempela okanye i-synthetic hormone metabolism-resistant. Ukubeka nje, ezi anabolic steroid esters ziba yiprohormone okanye iinguqulelo zepro steroid, ezifuna ukuba zisebenze emzimbeni.
Ekubeni i-anabolic steroid esters inikezelwa nge-injection ye-intramuscular, kubalulekile ukuqaphela izibonelelo ezibangelwa yile ndlela yokuhanjiswa kwe-steroid. Ukupheliswa kwe-Testosterone esters kuncipha njengoko ukufunxa kwe-esters kucotha ngokunjalo. Oku kunceda ukulwa nomcimbi wesiqingatha sobomi obufutshane be-testosterone esters. Ezi esters zisetyenziselwa unyango lokutshintshwa kwehomoni kunye namanqanaba aphantsi e testosterone, ngoko ke kubalulekile ukuba nesiqingatha sobomi obude.
Njengoko iminyaka enye, inqanaba le testosterone liqala ukuhla. Le yinxalenye yesiqhelo yokukhula kwamadoda, kukho ukuhla ngepesenti enye kumanqanaba e testosterone ngonyaka emva kweminyaka engama-1 ubudala. Nabani na ongaphezu kweli xesha unokufumana inzuzo kunyango lwe testosterone kunye nabo basebenzisa i-testosterone esters injections abathi babona ukuphucuka okuphawulekayo kwi-muscle mass, ukukhula kwemisipha, i-libido, kunye nempilo yengqondo kunye nomzimba jikelele.
I-injection ye-testosterone ineenzuzo ezininzi kodwa kubalulekile ukuba uqaphele ukuba xa uxoxa ngesi sihloko, ii-injection ze-testosterone zibhekisela kwiinaliti ze-testosterone esters. Ezi zitofu kufuneka zithathwe kanye emva kweeveki ezimbini ukuya kwezine, okwenza kube lula kubakhi bomzimba kunye nabadlali ukuba babambelele kunyango lwe testosterone. Eli khefu elide phakathi kweenaliti linokwenzeka ngenxa yokuba iinaliti ze-intramuscular zinciphisa ukufunxa kwe-testosterone ester egazini. Ngaphezu koko, inkqubo ye-esterification yenza i-synthetic testosterone metabolism ixhathise, oku kuthetha ukuba iya kukhutshwa ngokukhawuleza kwaye isetyenziswe ngumzimba. Konke oku kubangela isiqingatha sobomi obude be-testosterone yokwenziwa kunye nokupheliswa kancinci.
Ngokubanzi, abakhi bomzimba kunye neembaleki bakhetha iinaliti ze testosterone ngenxa yeenzuzo ezininzi zehomoni ezichazwe ngezantsi:
(1) Ukukhula Kwezihlunu
I-Testosterone isebenza njenge-anabolic steroid, yona ngokwayo ithetha ukwakhiwa kwemisipha. Ke, iinaliti ze testosterone zisetyenziswa ngokubanzi ngabadlali kunye nabakhi bomzimba ukuze bakwazi ukuphucula nokuphucula ukukhula kwemisipha. I-Testosterone idla ngokwenza imisebenzi yayo eyahlukeneyo ngokuguqula i-estrogen okanye i-dihydrotestosterone, eyona ndlela inamandla ngakumbi yehomoni. Nangona kunjalo, izibonelelo ezifunwa ngabakhi bomzimba zisiphumo sesenzo esithe ngqo se testosterone kwiimisipha kunye namafutha.
I-Testosterone ivuselela iiseli ze-muscle precursor ezaziwa ngokuba ziiseli zesathelayithi, ukuba zisebenze kwaye emva koko zifakwe kwimicu ye-muscle ukuze kubangele ukwanda kobungakanani bemisipha okanye ukudibanisa kunye nokwenza imicu emitsha yezihlunu. Kungakhathaliseki ukuba yeyiphi indlela elandelwayo, umphumo wokugqibela wokuvuselela i-testosterone kunyuswa kwemisipha. Esi sesinye sezizathu eziphambili zokuba kutheni iimbaleki kunye nabakhi bomzimba bakhetha ukusebenzisa iinaliti ze testosterone.
I-Testosterone iphinda ikhulise inani le-androgen receptors kwi-fiber ye-muscle ngokunyusa inani le-nuclei kwi-muscle fibers. Oku kunceda ngakumbi xa i-bodybuilders iqeqesha, njengoko uqeqesho luvame ukuphucula uvakalelo lwe-androgen receptors. Ngokunyuka kwenani le-receptors ezithintekayo kwi-testosterone esters, kulula ukuba i-testosterone ibophe kwiintambo ze-muscle kwaye yenze umsebenzi wokuphucula imisipha.
I-Testosterone yaziwa ngokubanzi njenge-anabolic steroid kodwa nayo i-anti-catabolic steroid ethetha ukuba ayigcini nje ukuvuselela ukwakhiwa kwemisipha, kodwa ikhusela ukuphuka kwemisipha ngokuvimbela umsebenzi we-hormone ye-catabolic emzimbeni. Oku kukhuthaza ukukhula kwezihlunu kubakhi bomzimba.
(2) Ukuphucula Ukunyamezela
I-Testosterone inamandla okuphucula ukuhamba kwegazi ngokuvuselela umsebenzi we-erythropoietin emzimbeni. Yintoni eyenziwa yile hormone kukuba ikhuthaza ukubunjwa kweeseli zegazi, ngokukodwa, iiseli ezibomvu zegazi. Oku kubaluleke kakhulu ekuqeqesheni iimbaleki kunye nabakhi bomzimba njengoko bafuna ioksijini eyandisiweyo ukuze bahambelane neemfuno ze-oksijini yemisipha ngexesha lokuzilolonga. Njengoko iiseli ezibomvu zegazi zithwala ioksijini egazini kwaye ziyihambise kwizihlunu ze-peripheral, oku kunyuka kweeseli ezibomvu zegazi ngenxa ye testosterone kuluncedo kakhulu kubo.
Ukubonelelwa kweoksijini okwandisiweyo kusebenza njengonyamezelo olwandisiweyo kuba kuthintela ukudinwa kwangaphambili kwemisipha kwaye ivumela iimbaleki zoqeqesho ukuba zisebenze ixesha elide.
(3) Ukunyuka kwaMandla emisipha
Eyona ndlela ilula ngayo i-testosterone yokwandisa amandla emisipha kukunyusa ubungakanani bemisipha, ekuye kwaxoxwa ngayo ngasentla. Lo matshini kwakukholelwa ukuba kuphela kwendlela yokusebenza ye iinaliti ze testosterone oko kubangele ukomelela kwemisipha kodwa inkqubela phambili yamva nje kwicandelo lamayeza ifumanise ukuba amandla emisipha nawo aphuculwe ngesenzo se testosterone kumanqanaba e-calcium.
Ukucutheka kwemisipha, kwaye ngenxa yoko, amandla axhomekeke ekukhululweni kwe-calcium ngaphakathi kweseli. I-Testosterone ikwandisa oku kukhululwa kwe-calcium, ukuphucula ukunyanzeliswa kwemisipha, kwaye ngoko, ukwandisa amandla omzimba. Oku kuluncedo ngakumbi kubakhi bomzimba ngokuzilolonga okubanzi kokuphakamisa iintsimbi.
(4) Intsebenzo eyongeziweyo yeembaleki
I-Testosterone, kwiindidi eziqhelekileyo, ayinayo impembelelo ethe ngqo ekusebenzeni kwezemidlalo, kodwa iimbaleki ze-Olimpiki zifunyenwe zinamazinga aphezulu e-testosterone. Bobabini abesilisa nabasetyhini baye bajongwa ukuba benza ngcono ngokunyuka kwamanqanaba e testosterone emzimbeni, nangona indlela yokusebenza ingekaziwa ngokucacileyo.
(5) Gcina amafutha omzimba kunye nokwakheka kobunzima
Njengoko i-testosterone isebenza ngokuthe ngqo kwinkqubo ye-nervous central ukulawula i-metabolism, akumangalisi ukubona ukwanda kwamafutha kunye nobunzima kumadoda ane-testosterone ephantsi. Ngaphezu koko, amanqanaba aphantsi e-testosterone emadodeni ahlala ekhokelela ekunciphiseni kwenkcitho yekhalori kunye namazinga acothayo e-basal metabolism ngenxa yempembelelo ye-testosterone kwinkqubo ye-nervous central.
Ukunyuka kwehomoni ye-testosterone ngokusebenzisa i-injection ye-testosterone inceda ukulawula ukubunjwa kobunzima kunye nomxholo oncitshisiweyo wamafutha emzimbeni. Iinaliti ze-Testosterone ziqinisekisa ukuba ubunzima obufunyenweyo bubunzima bomzimba obunzima kwaye kungekhona amafutha omzimba. Oku kunceda iimbaleki kunye nabakhi bomzimba njengoko bedla isixa esikhulu seekhalori kwaye emva koko batshise nabo, kodwa bangabi nakho ukulahleka kwezihlunu kodwa kunokulahleka kwamafutha.
I-injection ye-testosterone ininzi iqulethe i-testosterone esters ngenxa yeenzuzo ezahlukeneyo ze-esters ezichazwe ngasentla. Iimpawu zesakhiwo sezona ziqhelekileyo ze-esters zenaliti ye testosterone, xa kuthelekiswa namayeza e-testosterone, zikhankanywe ngezantsi:
Androgen Ester Uhlobo
Isikhundla (s) Moiet(ii) uhlobo ubudea
Testosterone engaxhaswanga C17β Undecanoic acid I-asidi enamafutha etsheyini ethe ngqo 11 1.58 0.63
Testosterone propionate C17β Propanoic acid I-asidi enamafutha etsheyini ethe ngqo 3 1.19 0.84
Testosterone phenylpropionate C17β Phenylpropanoic acid I-asidi enevumba elimnandi – (~6) 1.46 0.69
Testosterone isocaproate C17β Isohexanoic acid I-asidi ene-branched-chain fatty – (~5) 1.34 0.75
Testosterone isobutyrate C17β Isobutyric acid I-asidi enevumba elimnandi – (~3) 1.24 0.80
Isanti enomthamo C17β Heptanoic acid I-asidi enamafutha etsheyini ethe ngqo 7 1.39 0.72
Testosterone decanoate C17β I-asidi yeDecanoic I-asidi enamafutha etsheyini ethe ngqo 10 1.53 0.65
Testosterone cypionate C17β Cyclopentylpropanoic acid I-asidi enevumba elimnandi – (~6) 1.43 0.70
Testosterone caproate C17β I-hexanoic acid I-asidi enamafutha etsheyini ethe ngqo 6 1.35 0.75
Testosterone buciclated C17β Bucyclic acide I-asidi ye-carboxylic enevumba elimnandi – (~9) 1.58 0.63
testosterone - - - - 1.00 1.00
Ikhankanywe ngezantsi yimpawu ezithe ngqo ze-testosterone ester nganye kunye nendlela ezenza ngayo emzimbeni.
⧫ Testosterone Enanthate
Isanti enomthamo ithengiswa phantsi kwegama lebrendi, i-delatesteryl kunye ne-xyosted, kwaye inikwa njengenaliti ye-intramuscular okanye i-subcutaneous injection qho kwiiveki ezine. E-United States, yishedyuli ye-III elawulwayo kwaye isemthethweni ukuba isetyenziswe phakathi kwabo babandezeleka kumanqanaba aphantsi e-testosterone kunye nakwabesilisa abagqithisayo. ECanada, i-testosterone ester efanayo yishedyuli ye-IV elawulwayo.
I-Testosterone enanthate i-metabolized kwisibindi kwaye ikhutshwe kumchamo, kunye nesiqingatha sobomi beentsuku ezine ukuya kwiintsuku ezintlanu.
⧫ Testosterone Cypionate
Testosterone cypionate yeyona testosterone ester esetyenziswa ngokuqhelekileyo ethengiswa phantsi kwegama le-brand depo testosterone. Incinci kwicala lexabiso xa ithengwa ngegama lebrendi nangona kunjalo, iifomu zegeneric ze testosterone ester ziphantse zibe sisiqingatha sexabiso ledepo testosterone. I-Testosterone cypionate iphinda isetyenziswe kumadoda anamanqanaba aphantsi e-testosterone kunye nabadlali base-USA naseKhanada, yishedyuli ye-II elawulwayo yezinto kunye neshedyuli ye-IV elawulwayo ngokufanelekileyo.
Ukunikezelwa njengejoyi ye-intramuscular kuphela, i-Testosterone cypionate i-metabolized kwisibindi kwaye ikhutshwe kuzo zombini, umchamo kunye nendle, nangona ukuxinwa komchamo we-ester's metabolites engasebenziyo kuphezulu kakhulu. Inobomi besiqingatha seentsuku ezisi-8.
⧫ Testosterone Propionate
Ithengiswa phantsi kwegama lebrand, testoviron, Testosterone propionate yi testosterone ester elawulwa mhlawumbi ngenaliti ye-intramuscular okanye ngendlela ye-buccal yokulawula. Ngokufana nee-esters ezingentla, i-Testosterone propionate nayo ishedyuli ye-III elawulwayo yezinto kunye neshedyuli ye-IV elawulwayo e-USA naseCanada, ngokulandelanayo.
Ubomi besiqingatha se-testoviron ziiyure ze-20, kwaye emva kokuba i-metabolized kwisibindi, i-testosterone propionate ikhutshwe ngokuyinhloko kwaye iphelele kumchamo.
⧫ Testosterone Sustanon 250
I-Sustanon 250 okanye i-Sustanon 100 yi-injection ye-intramuscular elungiselelwe ngokudibanisa i-esters ezine ezahlukeneyo ze-testosterone, ezizezi, i-testosterone phenylpropionate, i-testosterone decanoate, i-testosterone isocaproate, kunye ne-testosterone propionate. Lulungiselelo lweoli ye-1 ml equkethe i-250 mg ye-testosterone esters ekhankanywe apha.
I-Sustanon isetyenziswa kakhulu kwi-Great Britain njengokutshintshwa kwe-testosterone kwaye ikwayeyona ikhethwa kakhulu ngabakhi bomzimba kunye nabadlali.
⧫ Testosterone Phenylpropionate
Ithengiswa phantsi kwegama le-brand testolent, i-testosterone phenylpropionate yi-testosterone ester eyaziwa ngokuba yi-Testosterone phenpropionate kunye ne-Testosterone hydrocinnamate. Yayiye yaba yinxalenye yeSustanon 250 ekhankanywe ngasentla ngoku iqulethe kuphela i-testosterone isocaproate. Yayisasazwa ngokubanzi eGreat Britain naseRomania, njengesithako esisebenzayo kwiimveliso ezininzi ezikwaqulethe ezinye ii-testosterone esters. Nangona kunjalo, ayithengiswa okanye isasazwe kakhulu ngoku kwaye isetyenziselwa iinjongo zophando.
⧫ Testosterone Decanoate
I-Testosterone decanoate ayithengiswanga njenge-testosterone ester yokulungiselela kodwa iyinxalenye yokulungiswa kwe-Sustanon kunye ne-testosterone isocaproate kunye ne-testosterone phenylpropionate. Le ester iyaphononongwa ngoku ngenxa yexesha elide lesenzo nangona kunjalo, ukunqongophala kwayo kokukwazi ukwenza njengento yokulungiswa kweyeza elinye kuthintela umphumo walo.
⧫ Testosterone Isocaproate
I-Testosterone isocaproate ithengiswa phantsi kwegama le-brand elithi Sustanon 250 okanye i-Sustanon 100. Ifumaneka njenge-injection ye-intramuscular eyenziwa yi-metabolized kwaye ikhutshwe kumchamo.
⧫ Testosterone undecanoate
Ithengiswa phantsi kwegama legama elithi Andriol kunye ne-Aveed, i-testosterone undecanoate, okanye i-testosterone undecylate isetyenziswa ngokubanzi kwixesha elide lesenzo. Le testosterone ester inesiqingatha sobomi beentsuku ezingama-21 xa ilungiswe ngeoli yembewu yeti kunye neentsuku ezingama-33 xa zilungiswe ngeoli ye-castor. I-Testosterone undecanoate yeyona inesiqingatha sobomi obude, kuzo zonke ii-testosterone esters ezine-testosterone decanoate eziza kwindawo yesibini.
I-Testosterone undecanoate yishedyuli ye-III elawulwayo yezinto ezilawulwayo kunye neshedyuli ye-IV elawulwayo e-United States yaseMelika naseCanada, ngokulandelanayo. Ukulawulwa njenge-injection ye-intramuscular, imveliso i-metabolized ngesibindi kwaye ikhutshwe ngokuyinhloko kumchamo. Ngenxa yesiqingatha sobomi obude kunye nedosi yokulawula ye-1000 mg, i-testosterone undecanoate ilawulwa kuphela kwiiveki ze-12.
Ngaphambi kokuthatha isigqibo malunga ne-testosterone ester engcono kakhulu yokwakha umzimba, kubalulekile ukuqonda ukuba yintoni eyenziwa yi-esters kunye nendlela esebenza ngayo. Ngaphezu koko, kubalulekile ukugqiba iimfuno zomntu kunye nokuba ingakanani i-testosterone efunekayo, kunye nendlela abakhi bomzimba kunye nabadlali abazimisele ngayo ukufumana i-testosterone injections. Emva kokuba konke oku kunqunywe, ukukhangela i-testosterone ester engcono kakhulu kunokuqala.
I-Testosterone propionate yeyona testosterone ester enexabiso eliphezulu kunye nesebenzayo kunye ne-sustanon. Abakhi bomzimba bafunyanwa kakhulu ukuba bathembe kwaye bafunge ngezi zimbini ze-testosterone esters. Enyanisweni, ezi zimbini zibhekwa njengeyona testosterone ingcono kakhulu yokwakha umzimba nangona kunjalo, oku kuxhomekeke kwinguqu ngokusekelwe kwiimfuno kunye nokuzimisela komakhi womzimba.
Ngolwazi oluthe kratya, i-raw umthengisi we-steroid unokuqhagamshelwana naye ukuze kuqondwe ukuba yeyiphi ekufaneleyo kwaye yeyiphi eyona idumileyo, kwaye ngoba. Ukuba i-testosterone injections ayiyona into ozimisele ukuyenza, ezinye iifom ze testosterone ezifana neepilisi ze testosterone kunye ne-powder testosterone eluhlaza kuzo zingasetyenziswa nazo.
1.Kutheni kufuneka ucinge nge-testosterone booster powders?
Njengoko kukhankanyiwe ngasentla, amanqanaba e-hormone ayehla njengoko iminyaka ihamba. Phakathi kweminyaka eyi-20 kunye ne-25 kuxa amanqanaba aphezulu. Njengoko ungena phakathi kwiminyaka engamashumi amathathu, inqanaba lehomoni yakho ngokuthe ngcembe liqala ukuhla. Ukunciphisa amanqanaba e testosterone ngobudala yinkqubo eqhelekileyo. Nangona kunjalo, okwenzekayo kukuba imisebenzi eyahlukeneyo yomzimba exhaswa yincindi yedlala iyachaphazeleka.
Uya kuqaphela ukuba ukunciphisa ubunzima kuba nzima nangona usebenza; ukusebenza ngokwesondo akulunganga njengoko kwakunjalo ngaphambili, kwaye uphuhliso lwemisipha luyachaphazeleka. Kwakhona, ukukhula kwemisipha kuncipha kakhulu. Kodwa akufuneki ukhathazeke okwangoku. Kukho izisombululo zendalo, ngendlela yezongezo zokutya, ezifumaneka kwiimarike. I-Testosterone booster powders eyenziwe kwizinto zendalo kufuneka inikwe ithuba njengoko abantu abaninzi baye baxhamla kwezi zongezo ngaphandle kwemiphumo emibi.
Ukhumbule ukuba ezi zongezo azenzelwanga ukonyusa amanqanaba omntu okwiminyaka yama-60s ukuze atshatise nomntu oselula kwiminyaka yabo yama-20. Zidalelwe ukunyusa amanqanaba, ngoko ke umzimba wenza yonke imisebenzi efunekayo exhomekeke kwinqanaba lehomoni eneziphumo ezingcono kakhulu.
2.Ziziphi iingenelo zokuthatha i-testosterone booster?
Ii-booster ze-testosterone ngokubanzi zizongezelelo zendalo ezonyusa i-testosterone kunye neehomoni ezinxulumene ne-testosterone emzimbeni wakho. Ezinye i-testosterone booster nazo zisebenza ngokuthintela i-estrogen, ihomoni yesini sabasetyhini.
♦ Kwizigulane ezine-hypogonadism (xa i-sex glands ivelisa i-hormone yesini encinci okanye ingabikho), i-testosterone boosters inokuguqula ngamandla ihlabathi labo ngokubenza bazive benamandla kunye nokunyusa.
♦ Amanye amadoda athatha i-boosters yokuvavanya angabona utshintsho oluhle kwiimoods zabo, ukwanda kwemisipha, ukuxinana kwamathambo, kunye nesondo.
♦ Ukongezelela, i-testosterone boosters inokunceda kwiingxaki ezinxulumene nokungasebenzi kakuhle kwe-erectile kwaye zingenza ukuba zihlale ixesha elide ebhedini.
♦ Izongezelelo zeTestosterone zikholelwa ukuba zinciphisa umngcipheko wesifo senhliziyo kunye nezifo ezinxulumene ne-dementia. Nangona kunjalo, abo bathambekele kwisifo senhliziyo kunye nemivimbo kufuneka balumke ngaphambi kokuba baqalise i-testosterone booster yalo naluphi na uhlobo. Ukuba uneengxaki zentliziyo kodwa uziva ukuba i-testosterone booster iyimfuneko, qhagamshelana nogqirha wakho ngaphambi kokuba uqale naluphi na unyango.
3.Kutheni abaninzi bomzimba bakhetha ukuthenga i-steroid testosterone enanthate powder?
I-Anabolic steroids i-testosterone enanthate powder isetyenziswa ngokuyinhloko ngabakhi bomzimba, abagijimi, kunye nokuqina komzimba "i-buffs" abathi i-steroids ibanika inzuzo yokukhuphisana kunye / okanye ukuphucula ukusebenza kwabo ngokomzimba. Iisteroids kuthiwa zonyusa ubunzima bomzimba obhityileyo, amandla kunye nobundlongondlongo. I-Testosterone enanthate powder nayo ikholelwa ukuba iyanciphisa ixesha lokubuyisela phakathi kokusebenza, okwenza kube lula ukuqeqesha ngamandla kwaye ngaloo ndlela kuphuculwe ngakumbi amandla kunye nokunyamezela. Abanye abantu abangengabadlali bezemidlalo nabo bajova i-testosterone enanthate oyile ukwandisa ukunyamezela kwabo, ubungakanani bemisipha kunye namandla, kunye nokunciphisa amanqatha omzimba abakholelwa ukuba kuphucula inkangeleko yomntu. Ngoko, i-testosterone enanthate powder ezithengiswayo zizinto eziqhelekileyo kakhulu kwiimarike, Apho kukho abathengi, kukho abathengisi. I-AASraw ihlala ibonelela ngovavanyo lwangempela lwe-e powder kunye nezinye i-testosterone powders e-China.
4.Ingaba i-testosterone powder ayikho mthethweni?
Ubume bomthetho be-testosterone powder buxhomekeke kwimithetho yelizwe kunye nokuba ingaba liyeza elimiselweyo. EUnited States, i-Testosterone powder yinto elawulwayo yeShedyuli III, oku kuthetha ukuba awukwazi ukufumana le anabolic steroid ngaphandle komyalelo osebenzayo ovela kugqirha wakho.
Unokukwazi ukuthenga i-testosterone powder kwi-counter kodwa oku kuya kuxhomekeka kwimithetho yelizwe lakho. Ngokomzekelo, unokuthenga i-Testosterone powder phezu kwe-counter eMexico ngaphandle kwemithi kodwa ichasene ngokungqongqo nomthetho ukuzisa i-testosterone propionate e-United States.
5.Indlela yokwenza i-homebrew testosterone oyile inyathelo ngenyathelo? (ioli ye-Testosterone enanthate njengomzekelo)
Kubantu abaninzi, bakhetha ukwenza i-oyile ye-testosterone ngokwabo, yinkqubo elula kakhulu kwaye inokugqitywa ngathi, ngokude nje ulungele zonke izixhobo kunye neendlela zokupheka, kuba ezininzi ii-raw steroid zinenkqubo efanayo yokwenza ioli egqityiweyo yokujova. Masiyenze ngoku. Kulo mzekelo ndiza kusebenzisa i-testosterone enanthate.
Ndiza kwenza iibhotile ezili-10 ze-testosterone enanthate kwi-10ml ngebhotile. Leyo yitotali ye-100ml into kwaye siya kuyenza i-250mg / ml
Kule nto sizakusebenzisa umlinganiselo we-BA/BB ka-2/18, okuthetha ukuthi 2%ba kunye ne-18%bb, awunayo ngokwenene “ukuba” ube ne-bb kule nto kodwa inceda ubhityile umxube kwaye ikuvumela ukuba usebenzise kancinci. ba, ukwenza ukudubula kungabi nantlungu kwaye unokunyuka ngokulula ukuya ku-400mg/ml ukuba uyafuna
1) Xhuma zonke iinguqu kwi-calculator ye-roid,
Apha uya kufaka i-oyile ml's=100ml
Idosi iya kuba yi-250mg/ml
Shiya ubunzima bomgubo kwi-.75, oku kusebenza kakuhle kuyo yonke into
Ba, iplagi phakathi .02(2%)
BB, iplagi phakathi .18(18%)
Oku kuya kukunika oku kulandelayo ngokwekhaltyhuleyitha
-61.25ml yeoli engenazintsholongwane (ndikhetha i-grapeseed)
-25.00 iigram ze-enanthate powder
2) Sebenzisa i-500ml yebeaker kwaye uyicocise kangangoko unakho, hayi into enkulu njengoko siyakuhluza oko sikukhuphayo kuyo. Thatha i-25.00 grams ye-enanthate powder kwaye uyifake kwi-beaker.
3) beka i-2ml ye-BA kunye ne-18ml ye-BB apho, oku kulinganiswa ngokulula ngesirinji ye-10 okanye i-20cc. Kuya kubonakala ngathi oku akwanelanga ukunyibilikisa wonke umgubo, kodwa kuya kuba njalo.
4) beka ipani yokuqhotsa kwisitovu phezulu kwinqanaba lobushushu 3 okanye kunjalo, ndiyathanda ukubeka amanzi epanini kwakhona. Okulandelayo seta ibhekile ene-ba/bb/umgubo epanini kwaye uyeke amanzi/ipani shushu ibhekile. Uza kubona i powder iqala "ukunyibilika" okanye ukunyibilika kwaye iya kwenza isisombululo esicacileyo. Ungasebenzisa intonga yeglasi ukuvuselela nokukhawulezisa le nkqubo
5) Emva kokuba i-ba / bb ichithe umgubo, ngoku uthele i-61.25ml yeoli eyinyumba kwaye ushiye ubushushu kwaye udibanise ngentonga yeglasi imizuzu embalwa, uya kuba nomxube ocacileyo ocacileyo.
6) Okulandelayo ndithanda ukuthothisa ubushushu ku-1 okanye njalo ukuze umxube uhlale ushushu……ukucoca umxube ngelixa ushushu kulula kakhulu kunaxa ubushushu begumbi.
Faka inaliti yakho entsha ye-18g kwisithinteli serabha kunye nakwibhotile eyi-100ml engenazintsholongwane. Beka i-.45 whatman filter phezu kweenaliti nje ngoguqulo lwe-fina.
7) Sebenzisa isirinji eyi-10ml ukutsala i-oyile efudumeleyo, tyhala i-oyile iphumele kwisihluzo se-whatman nakwivial yeglasi engenazintsholongwane. Ubukhulu besirinji oyisebenzisayo kokukhona kuqina ukutyhala ioli apho. Ndidla ngokusebenzisa isirinji eyi-30ml ukutsala i-oyile kwibeaker kwaye emva koko ndigcwalise i-10ml yesirinji kwaye ndiyityhale ngesirinji eyi-10ml njengoko inzima kakhulu ukuyityhala nge-30ml.
8) emva kokuba yonke into ityhalwe nge-100ml ku-250mg/ml ye-steroid etofwayo engenazintsholongwane nekhuselekileyo. Abanye bayathanda ukubhaka ukuze babulale inzala ngakumbi ngeli xesha kodwa mna andifumani mfuneko yokuba unezithako eziyinyumba. Ndithathe amakhulu cc's kwaye zange ndibenayo ingxaki yobunyumba, i-ba iyawenza umsebenzi wayo ukuyigcina inyumba!
9) ngoku ungazoba ii-10ccs ngexesha kwaye ugcwalise iibhotile eziyi-10ml ngabanye ukwenza iibhotile ezili-10
Le yinkqubo epheleleyo yokwenza ioli egqityiweyo, ndiyakholelwa ukuba imibuzo emininzi iye yaphendulwa emva kokufunda eli nyathelo. indlela yokwenza i-testosterone propionate kwi-powder? indlela yokuguqula i-testosterone powder ibe yinguqu yeoli? Vavanya iioyile zeprop kunye novavanyo lweeoyile zecyp, nkqu sus 250 ioyile, inkqubo yeoyile yasekhaya iyafana, iresiphi eyahlukileyo kuphela. Kwiresiphi, kufuneka uthethe neentengiso zethu xa ubeka iodolo, baya kuzama ukunika ulwazi ofuna ukuyazi.
6.Yintoni i-sustanon 250 powder eyenziwe ngayo?
ISustanon 250 ngumxube odumileyo we testosterone (umxube) kwaye ngaphandle kwamathandabuzo ngowona mxube udumileyo nowaziwa kakuhle owakha wenziwa. Eyenziwe ngu-Organon, ingcamango emva kweSustanon 250 yayikukubonelela ngeyona nto ingcono kakhulu (ifutshane) kunye nenkulu (ixesha elide) i-ester testosterones kwikhompawundi enye. Oku kuya kuvumela umntu ukuba agcine amanqanaba egazi azinzileyo ehomoni ye-testosterone kunye neshedyuli yokutofa okungaqhelekanga ngelixa kwangaxeshanye efumana izibonelelo ezisebenza ngokukhawuleza. Kukho ii-esters ezine ezenza umxube we-sustanon 250:
testosterone propionate 30 mgs: Ngaphandle kwe-250 mgs eyenza le khompawundi, kuphela i-30mg (12%) yi-ester emfutshane kakhulu ye-propionate; kungoko, sustanon 250 akufuneki iphathwe njengepropionate. Ngokuqhelekileyo, i-ester ye-propionate isetyenziswe ngabo bafuna i-ester emfutshane kumjikelo weeveki ze-8 kuphela okanye ngaphantsi, ekufuneka ijojowe yonke imihla okanye yonke imihla. Ubomi besiqingatha buziintsuku ezi-3.5 kuphela, ngoko bungena kwaye buphuma kwinkqubo ngokukhawuleza kunezinye ii-esters. Ngapha koko, uninzi lwabakhi bomzimba bathi bafumana i-aromatization encinci evela kwipropionate, enokuthi ibe nento yokwenza nento yokuba ayihlali kwinkqubo ixesha elide.
testosterone phenylpropionate 60 mgs: Le ester iyona yesibini emfutshane yokudibanisa, kwaye ifumaneka kakhulu kwi-Nandrolone Phenylpropionate (NPP). Inobomi besiqingatha seentsuku ezi-4.5 kuphela, ngoko ke njengoko i-propionate ihla ngokukhawuleza, unokulindela ukuba i-phenylpropionate ibe khona kwaye inikeze ukunyusa ngaphambi kokuba ii-esters ezide ziqale ukukhaba.
testosterone isocaproate 60 mgs: Le yi-ester yesithathu efutshane kunye nesiqingatha sobomi obudweliswe kwiintsuku ze-9, ekufutshane ne-enanthate ester, ekubeni ineentsuku ze-10.5 zesiqingatha sobomi.
testosterone decanoate 100 mgs: Le ester ende kakhulu ibambe isabelo esikhulu se-substance esebenzayo kwi-sustanon, eyenza i-100 mgs kwi-250 mgs iyonke. Ubomi besiqingatha sale ester bubunzima beentsuku ezili-15.
Testosterone sustanon powder iresiphi umzekelo:
Testosterone Sustanon 250mg/ml @ 100ml iresiphi yokupheka:
Testosterone Blend powder 25g (18.75ml)
I-59.25ml ioli echitshiweyo
7.Yiyiphi i-testosterone engcono kakhulu ye-Testosterone Sustanon 250 powder okanye i-enanthate powder?
Xa kuziwa ekuthelekiseni i-Sustanon 250 powder kunye ne-Testosterone Enanthate powder, umahluko ophambili uhlala kubude be-ester.
I-Sustanon 250 powder, ibe yindibaniselwano yexesha elide ye-Testosterone, ithatha ixesha elide ukuba "ikhabe" kodwa izibonelelo ezivela kule ngqungquthela ye-anabolic inokufezekiswa kunye ne-injection encinci. I-Testosterone Enanthate, ngakolunye uhlangothi, iyadingeka ukuba ilawulwe veki nganye ngenxa yeester ezimfutshane nangona iziphumo zayo zikhawuleza kuneSustanon.
I-Testosterone enanthate powder, xa isetyenziselwa imijikelezo yeeveki ze-10-12, i-steroid efanelekileyo njengoko kulula kubadlali ukuba banqume kwaye balawule amanqanaba e-testosterone. Nangona, le nzuzo inokulahleka ngandlel' ithile xa ixesha lomjikelo liziiveki ezi-4-6 njengoko iziphumo ze-steroid ziya kuqala ukuvela emva kweeveki ze-2-4. Ngenxa yee-esters ezixubileyo, i-Sustanon iyi-steroid enzima ukujongana nayo xa kuziwa ekulawuleni ngokufanelekileyo amanqanaba egazi.
Nangona kunjalo, i-Testosterone enanthate powder ikholelwa ukuba iyanyamezeleka ngakumbi kune-Sustanon xa ifika kwi-estrogenic side-effect management. Oku kubangelwa ukuba amanqanaba egazi e-testosterone athambekele ekwakheni ngesantya esicothayo kunye nokusetyenziswa kwe-Testosterone enanthate kwaye oku kuthetha ukuba iziphumo ebezingalindelekanga azibonakali kwangoko. Ukhetho phakathi kwe-Sustanon 250 powder kunye ne-Testosterone Enanthate powder kuphela kuxhomekeke kwizinto ezilindelekileyo kumjikelezo we-steroid kunye namava adlulileyo (ukuba kukho).
8.Vavanya u-E umgubo Vs. Vavanya umgubo C
▪ Uvavanyo lwe-E powder kunye ne-Test C powder ziintlobo ezimbini ze-esterified testosterone variants.
▪ Eyona njongo ye-testosterone esterification kukwandisa ukusetyenziswa kwezonyango kunye nokungasetyenziswa kwezonyango.
▪ Ngoko ke, zombini ezi ntlobo zahlukeneyo zisebenziseka ngakumbi kwaye zisebenziseka.
▪ Bandise isiqingatha sobomi.
▪ Zii-androgens ezinempembelelo ephantse ifane neye-testosterone booster.
▪ Zombini zibalulekile kwezamayeza kunye nokwakha umzimba ukunyusa amanqanaba asezantsi e-testosterone.
▪ Zinokujongwa ngeenaliti.
▪ Zombini zithandwa ngenxa yokwanda kwesiqingatha sobomi kunye nexesha elide lokukhupha ifestile eyenza ukuba inaliti kunye neenkqubo zokulawula zifezekiswe.
Uvavanyo lwe-E powder okanye i-Testosterone Enanthate powder ibhekisela kwi-ester emhlophe okanye emhlophe ye-crystalline ester C26H40O3 ye testosterone esetyenziswa ngokukodwa kunyango lwe-eunuchism, i-eunuchoidism, ukusilela kwe-androgen emva kokuchithwa, iimpawu ze-andropause, kunye ne-oligospermia ngelixa i-Test C powder okanye i-Testosterone Cypionate powder ibhekisela. kwi-oil-soluble 17 (beta) -cyclopenylpropionate ester ye-androgenic hormone testosterone esetyenziswa kakhulu kunyango lwamanqanaba aphantsi e-testosterone kumadoda. Ngaloo ndlela, oku kuchaza umahluko omkhulu phakathi kovavanyo lwe-E powder kunye noVavanyo lwe-C powder. Kwakhona, omnye umehluko phakathi kovavanyo lwe-E powder kunye noVavanyo lwe-C powderis oluvavanya u-E powder lunemvelaphi yendawo yonke ngelixa uVavanyo C luyimveliso yaseMelika.
Ubomi besiqingatha ngumahluko omkhulu phakathi kovavanyo lwe-E powder kunye noVavanyo lwe-C powder. I Isiqingatha sobomi boVavanyo E yimihla ye-10.5 ngelixa i-half-life ye-Test C yimihla ye-12. Umlinganiselo oqhelekileyo woVavanyo E yi-100 ukuya kwi-600 mg ngeveki kwi-10 ukuya kwiiveki ze-12 ngelixa umlinganiselo oqhelekileyo wovavanyo lwe-C yi-400 ukuya kwi-500 mg ngeveki kwiiveki ze-12 .Ngaphezu koko, uVavanyo lwe-E kufuneka lutofwe rhoqo kunoVavanyo lweC.Popularity ikwangumahluko phakathi koVavanyo E kunye noVavanyo C. UVavanyo E luthandwa kakhulu ngelixa uVavanyo C luthandwa kancinci.
Uvavanyo lwe-E powder okanye i-Testosterone Enanthate luhlobo lwe-esterified testosterone variant kunye nesiqingatha sobomi beentsuku ze-10.5. I-7-carbon ester enemvelaphi yendalo yonke. Ngakolunye uhlangothi, uVavanyo C luhlobo lwe-esterified testosterone variant kunye nesiqingatha sobomi beentsuku ze-12. Kwakhona, yi-8-carbon ester enemvelaphi yaseMelika. Nangona kunjalo, ngenxa yobude obuncinci besiqingatha sobomi, uvavanyo lwe-E kufuneka lutofwe ngokuphindaphindiweyo kunovavanyo lwe-C powder. Ke ngoko, umahluko ophambili phakathi koVavanyo E kunye noVavanyo C kukuba umsebenzisi ufuna ixesha elingakanani aqhube ikhompawundi nganye ngesiphumo esiphezulu, kunye ne-injection frequency esekelwe kwi-ester.
9.Ukuqala njani umjikelezo we testosterone propionate?
Abaninzi babuza umbuzo malunga nokuba imijikelo emifutshane inenzuzo ngakumbi okanye ayikho. Impendulo kukuba, njengoko imijikelezo emide ye-anabolic steroid ibonisa umba we-HPTA enzima kakhulu (i-Hypothalamic Pituitary Testicular Axis) yokunyanzeliswa kunye nokuvalwa, okubangelwa ixesha elinzima kakhulu lokubuyisela ngexesha leeveki zomjikelezo. Uninzi lwexesha elinemijikelo emifutshane, i-HPTA “ayibambeleli” ngokukhawuleza kwiihomoni zangaphandle. Yiyo loo nto abaninzi beyonwabela imijikelo emifutshane enje ngeeveki ezisi-8-umntu uya kukwazi ukungena kumjikelezo ngokukhawuleza, enze iinzuzo zakhe ngokukhawuleza, kwaye aphume kumjikelo aye kwi-PCT (iPost Cycle Therapy) ngaphambi kokuba umzimba uqale ukujongana nobunzima. HPTA ukucinezela okanye ukuvala. Ewe kunjalo, wonke umntu unobuntununtunu obahlukileyo bokuvalwa kweHPTA (ezinye zivala kancinci kunabanye, ezinye zikhawuleza kunabanye, kwaye ezinye azicimeki kwaphela). Kodwa njengengcamango eqhelekileyo ekwabelwana ngayo ngabaninzi abanandipha imijikelezo yeTestosterone Propionate ngokukodwa kukuba imijikelezo emfutshane ingcono ngenxa yezi zizathu.
❶ Umqali we-Testosterone Propionate Cycle
Umqali we-Testosterone Propionate Cycle Umzekelo (iiveki ze-10 zizonke ixesha lokujikeleza)
I-Testosterone Propionate kwi-75 -125mg yonke enye imini (300-500mg / ngeveki)
Lo ngowona mjikelezo osisiseko wabaqalayo, kwaye ngowona ulula kuyo yonke imijikelezo yeTestosterone Propionate yabaqalayo. Yintshayelelo epheleleyo kwi-anabolic steroids ngokubanzi kunoma yimuphi umntu omtsha kwihlabathi lokusetyenziswa kwe-anabolic steroid.
❷ Umjikelo weTestosterone Propionate oPhakathi
Umzekelo we-Testosterone Propionate Cycle (iiveki ze-10 zizonke ixesha lokujikeleza)
I-Testosterone Propionate kwi-75-125mg yonke enye imini (300-500mg / ngeveki)
I-Nandrolone Decanoate (i-Deca Durabolin) kwi-400mg / ngeveki
Iiveki ze-1-4: I-Dianabol kwi-25mg / ngosuku
Umzekelo ogqibeleleyo womjikelezo apho umntu uya kusebenzisa i-anabolic steroid emfutshane, efana ne-Testosterone Propionate, kunye ne-anabolic steroid ende ehlala ixesha elide efana ne-Nandrolone Decanoate (Deca Durabolin). Ngeenkcukacha ezithile, umntu uya kudla ngokumisela i-Testosterone Propionate yonke imihla, ngelixa i-Deca Durabolin iya kulawulwa kabini ngeveki ngokulinganayo (ngoMvulo nangoLwesine, umzekelo). Umntu obandakanyekayo kulolu hlobo lwe-Testosterone Propionate umjikelezo uya kucwangcisa kunye nexesha le-Nandrolone Decanoate injections ukuba lihambelane ne-injection ye-Testosterone Propionate eyahlukeneyo. Oku kuthetha ukuba, umzekelo, ukuba ishedyuli ye-injection ye-Testosterone Propionate ihla ngeentsuku ezilandelayo ngoLwesibili, ngoLwesine, ngoMgqibelo, ngoMvulo, ngoLwesithathu emva koko i-Nandrolone Decanoate iya kulawulwa ngoLwesibini nangoMvulo welo shedyuli yolawulo.
❸ I-Advanced Testosterone Propionate Cycle
Advanced Testosterone Propionate Cycle Umzekelo (iiveki ezi-8 zizonke ixesha lomjikelo)
Testosterone Propionate kwi-25mg yonke enye imini (100mg / ngeveki)
I-Tren Acetate kwi-100mg yonke enye imini (400mg / ngeveki)
Umzekelo oqhelekileyo kunye no-quintessential wemijikelezo ephezulu ye-Testosterone Propionate, lo mjikelo ubonakaliswa ngokusetyenziswa kwe-Testosterone Propionate njengekhompawundi exhasayo esetyenziswa kwiidosi ze-TRT kuphela ngenjongo yokugcina umsebenzi oqhelekileyo wezinto eziphilayo ngokungabikho kwemveliso ye-Testosterone engapheliyo. icinezelwe ngenxa yokusetyenziswa kwe-anabolic steroids).
10.Ndiyitofa kangaphi i-cypionate yovavanyo?
Kuxhomekeke kwisiqingatha sobomi be-ester ye testosterone oyifakayo.
Testosterone propionoate - yonke imihla okanye yonke imihla yesibini (cebisa yonke imihla)
I-Testosterone enanthate / cypionate / sustanon - Kanye ngeveki iphelele, unokwenza ngokungathandabuzekiyo ukuba zonke iintsuku ze-10. Oogqirha ngamanye amaxesha banika oku rhoqo kwiiveki ezimbini, okuyimpazamo.
I-Testosterone i-decanoate kunye ne-undecanoate-Musa ukusebenzisa ezi shitty esters, ngokwenene azilunganga kwintsebenzo yezemidlalo xa usebenza. Ngokuqhelekileyo ufumana inaliti yehashe enkulu rhoqo kwiiveki ezi-6 okanye njalo.
Ukuba isithuba iinaliti zakho ngaphandle kakhulu ufumana inxalenye yexesha kunye T ephantsi kunye nenxalenye yexesha nge super high T. Ngoko ufumana utshintsho olumangalisayo mood, kunye nokudakumba / whiny malunga nosuku lokugqibela shot yakho.
11.Ifakwa njani Uvavanyo lwe-e/cyp/prop/sus 250?
Kufuneka itofwe kwisihlunu sempundu. Akufunekanga itofwe emthanjeni. Landela idosi echanekileyo ngokomjikelo owulandelayo. Ukutofa uvavanyo lwe-e okanye uvavanyo lwe-cyp luyinkqubo elula kakhulu xa sele uyenzile amaxesha ambalwa ngesikhokelo. I-Testosterone prop/cyp/E ilawulwa kuphela ngesitofu, ngokungathandabuzekiyo eyona ndlela isebenzayo yokufumana i-testosterone emzimbeni wakho. Ngenaliti, unokuqinisekisa ukuba i-testosterone yakho ithatha umphumo okhawulezayo kwaye yenza kube lula kuwe ukuba unqobe iziphumo zecala le testosterone ephantsi.
12.Ingakanani i-testosterone cypionate dosage yokunyusa okanye ukusika?
Ukuba ujonge ukunyusa kwaye ufumane ubunzima bezihlunu ezibhityileyo, kufuneka utofe i-200-600 mg ye-steroid rhoqo ngeveki ubuncinane kwiinaliti ze-2-3. Uninzi lwabasebenzisi badla ngokusasaza ezi naliti ngaphandle, umzekelo 100 mg naliti nganye ngosuku lokuqala kunye neyesibini, emva koko 200 mg yonke enye imini kwiveki elandelayo.
Ukuba uzama ukulahlekelwa ngamanqatha kunye nokuphucula inkcazo yomzimba wakho, ngoko unokunciphisa umthamo we-Testosterone Cypionate kakhulu. Kunokuba unamathele kwi-dose yeveki ye-200-600mg, zama ukusebenzisa i-100-200 mg ngeveki. Ukuba uceba ukusebenzisa i-steroid ngeenjongo zombini, ngoko qalisa nge-200 mg yonke imihla de ufike kwiiveki ze-6, uzame ukusika umva kwi-100mg yonke imihla.
13.Ngaba abafazi banokutofa i-testosterone? Kuthekani ngomjikelo?
Abasetyhini abafuna ukuphucula ukusebenza kwabo ngokomzimba kunye nobuhle aboyiki ukuba kunokwenzeka ukuba bavelise iimpawu ezingalunganga. Kubadlali, umjikelezo we-solo we-testosterone enanthate unconywa, ongafanele uhlale ngaphezu kweeveki ze-8. I-anabolic steroid ilawulwa kwi-dose ye-250mg kanye ngeveki.Kulo lonke umjikelezo, i-8 ampoules yeziyobisi iya kufuneka. Unyango lwasemva komjikelo kubasetyhini kufuneka kuhlale ubuncinane iintsuku ezingama-21. Unokuphinda uthathe i-testosterone kungekho ngaphambili emva kweenyanga ze-6, kuphela emva kokubonisana nodokotela kunye nokwenza iimvavanyo ezifanelekileyo.Kukho abafazi abathile abaya kukhetha i-stack steroid ebandakanya ngaphezu kwe-Testosterone Enanthate kuphela. Abasetyhini ngokuqhelekileyo bakhetha u-Anavar, i-Primobolan okanye i-Masteron ukupakisha ecaleni koVavanyo. Khetha okukusebenzelayo!
14.Kuthatha ixesha elingakanani uvavanyo propionate ukusebenza?
Ukuba unengxaki ye testosterone ephantsi kunye neziphumo ebezingalindelekanga eziza kunye nayo, mhlawumbi unomdla wokubona iziphumo zonyango lwe-testosterone propionate injection. Oko kuyaqondakala, kuba ukujongana ne testosterone ephantsi akusoloko kuyinto elula. Ukuba uyazibuza malunga nokuba i-testosterone propionate injections iya kuthatha ngokukhawuleza kangakanani ukukhaba, awuwedwa. Wonke umntu ufuna ukwazi ukuba banokulindela ngokukhawuleza kangakanani iziphumo kunyango lwabo lokutofa.
Nge testosterone propionate injections, ixesha lokuphendula lomzimba wakho lingahluka kakhulu ngokusekelwe kwizinto ezininzi. Oku kunokubandakanya iminyaka yakho kunye nezinye izinto ezininzi.
Ngokuqhelekileyo, unokulindela ukuba i-testosterone propionate injections iqale ukusebenza phakathi kweeveki ze-3. Nangona kunjalo, umonde ungundoqo xa usebenzisa ii-injection ze testosterone njengendlela yonyango ye-testosterone ephantsi. I-Testosterone propionate injections ingathatha ukuya kwiiveki ze-6 ukuqala ukusebenza. Nceda ujonge iphepha lethu lexesha le-TRT ngolwazi olungakumbi malunga nokuba ulindele ntoni kwiinaliti ze testosterone.
Ukuba unenkxalabo ngesantya apho iinaliti zakho ze testosterone zikhoyo okanye zingasebenzi kwimeko yakho, kuya kufuneka udibane nochwephesha wezonyango ukubuza malunga nemfuneko yohlengahlengiso lwedosi kunye nokuphindaphinda.
15.Zithini iziphumo ze testosterone enanthate ngaphambi nasemva?
ubude bexesha iziphumo
Emva kweeveki ezimbini Akukho lutshintsho lubalulekileyo okanye iziphumo ezixeliweyo.
Emva kwenyanga enye Ukuzuza kwemisipha kunye nenkqubo yokutshisa amanqatha yayiza kuqala kwinyanga yokuqala.
Emva kweenyanga ezimbini Ukuzuza kwemisipha kunokuqatshelwa emva kweenyanga ezimbini kunye neziphumo ezibi nazo zihamba kunye nabasebenzisi abaninzi.
Emva kweenyanga ezintathu Kwiiveki ezilishumi elinambini kufuneka uliyekise eli chiza kangangexesha lokupholisa. Nangona kunjalo, ngeli xesha, ubuya kuba wakhe izihlunu ezibalulekileyo.
16.Ngaba ndifuna umyalelo wokuthenga i-Testosterone hormone powder?
Ewe, ukuba ukhangela i-Testosterone hormone powder ngenxa yezizathu zonyango, udinga umyalelo. Ukuba uyisebenzisela izizathu ezingezizo ezonyango, unokuyi-odola kwimarike emnyama kwi-intanethi ngokungekho mthethweni, kukho ezininzi i-steroid. testosterone powder abathengisi.
17.Ngaba kukho i-Testosterone esters yokwenene powders ezithengiswa eChina?
Njengoko sonke sisazi, ezo testosterone esters powders, test ester powder, test cyp powder, test prop powder, sus 250 powder zithandwa kakhulu kwi-anabolic steroids kwiimarike, kwaye kufuneka zifumaneke ngokulula kwimarike emnyama ye-anabolic steroid ngaphandle komzamo. . zikwaxhaphakile kwaye zenziwa lula kangangokuba kufuneka zifunyanwe ngamaxabiso afikelelekayo. I-Testosterone Enanthate ikhona njengemveliso yebakala lonyango lomntu, kunye neemveliso zebakala zangaphantsi komhlaba (UGL) kwimarike. Umahluko uyabonakala apha, kunye nokulawulwa kwekhwalithi yeyona nto iphambili, kwaye i-testosterone powders yebakala leyeza ngokuqhelekileyo ibiza kakhulu ngenxa yezizathu ezicacileyo.
Xa uthatha isigqibo sokuthenga i-testosterone powder kwi-intanethi, kufuneka ufunde ngakumbi kwaye ufumane ababoneleli abaninzi, xa kuthelekiswa nabo.Ndimele ndikhumbuze ukuba kufuneka uhlawule ingqwalasela engakumbi kumgangatho we-raw, ukufumana i-steroid yangempela ye-raw supplier ibaluleke kakhulu kwaye ingakwazi. kukunceda ugcine amaxesha athile, unokufumana abathengi abathembekileyo kunye neshishini elingakumbi kwixesha elizayo. I-AASraw yenze le shishini iminyaka emininzi kwaye unokuthetha kunye neentengiso zabo ngeenkcukacha ezingakumbi, okanye ubuze iodolo yesampula yovavanyo ngexesha lokuqala.
18.Ucinga njani ngeemveliso ze-AASraw? (Nakuphi na ukuphononongwa kwe-Test Cyp powder, Test E powder, Test P powder kunye ne-Sus 250 powder?)
Tommy (ngoMatshi 4, 2021): Ndivuyiswa ngokwenene ukuba ndiqalise ukwenza imijikelezo ye-Testosterone Prop yodwa kuba ibe yenye yezona zinto zingcono kakhulu ze-steroids zokukhula ngokukhawuleza kwemisipha kunye nokwandisa amandla. Eyona nto ingcono ngale anabolic steroid kukuba indinika ukunyusa kwi-libido yam kunye ne-sex drive.
UMichel (ngo-Epreli 18, 2021): Ndithenge uvavanyo lwe-cyp powder eluhlaza kwinyanga edlulileyo kwaye eyona nto ingcono ngayo kukuba indinceda ngokwenene ukwandisa ukuzithemba kwam. Le steroid iye yandinceda ukuba ndifumane ubunzima obuninzi bemisipha kunye nokuphucula ukusebenza kwam ngokomzimba kwindawo yokuzivocavoca.
UMike (nge-16 ka-Agasti 2020): Uvavanyo lwe-E powder lungenye ye-steroids engcono kakhulu yokulahlekelwa kwesisindo kuba inceda ngokwenene ukuba ndilahle amanqatha amaninzi omzimba. Ndilahlekelwe bubunzima obuninzi ngelixa ndifumana ubunzima bezihlunu ezibhityileyo emva kokwenza imijikelo emininzi ye-solo testosterone propionate.
UJay Cooper (ngoMeyi 12,2020, XNUMX): Ndikwazile ukunciphisa ipesenti yamafutha omzimba, ngelixa ndongeza ubunzima bemisipha emva kokutofa i-Sus 250 yeoli. Le steroid iye yandinceda ukuba ndifezekise iinjongo zam zokuzilolonga kwindawo yokuzivocavoca kuba iphakamisa amandla am kunye namanqanaba okunyamezela.
Austin (ngoJuni 17,2021): Ndiyayixabisa ngokwenene ukuba ndikhetha i-aasraw kwaye ndifumene uvavanyo lwangempela lwe-e powder xa ndiqala ngqa ukuthenga i-testosterone enanthate powder evela eChina, iphumelele. Ndiyathanda ukwenza imijikelezo ye testosterone propionate kwaye emva koko ndenza i-PCT kuba indinceda ndigcine amandla am kwaye ndiphucule ubunzima bam bemisipha. Le steroid iphelele ekufumaneni ubungakanani kunye namandla kwindawo yokuzivocavoca, ngelixa indinceda ukuba ndigcine ukusebenza komzimba okumangalisayo.
 Apicella CL, Dreber A, Campbell B, Grey PB, Hoffman M, Little AC (Novemba 2008). "I-Testosterone kunye nokukhethwa kwengozi yezemali". I-Evolution kunye nokuziphatha kwabantu. 29 (6): 384–90. doi:10.1016/j.evolhumbehav.2008.07.001.
 Hoskin AW, Ellis L (2015). "I-Testosterone ye-Fetal kunye noLwaphulo-mthetho: Uvavanyo lwe-Evolutionary Neuroandrogenic Theory". I-Criminology. 53 (1): 54–73. doi: 10.1111/1745-9125.12056.
 Bailey AA, Hurd PL (Matshi 2005). "Umlinganiselo wobude beminwe (2D: 4D) ihambelana nobundlobongela obungokwenyama emadodeni kodwa kungekhona kwabasetyhini". Psychology yebhayoloji. 68 (3): 215–22. doi:10.1016/j.biopsycho.2004.05.001.
 Meinhardt U, Mullis PE (Agasti 2002). "Indima ebalulekileyo ye-aromatase/p450arom". Iisemina kwi-Reproductive Medicine. 20 (3): 277–84. doi:10.1055/s-2002-35374. PMID 12428207.
 UWaterman MR, uKeeney DS (1992). "Iimfuza ezibandakanyekayo kwi-androgen biosynthesis kunye ne-phenotype yamadoda". Uphando lweHormone. 38 (5–6): 217–21.
 De Loof A (Okthobha 2006). "I-Ecdysteroids: i-sex steroids engahoywanga yezinambuzane? Amadoda: ibhokisi emnyama”. Inzululwazi yezinambuzane. 13 (5): 325–338. doi:10.1111/j.1744-7917.2006.00101.x. S2CID 221810929.
 Guerriero G (2009). "I-Vertebrate sex steroid receptors: i-evolution, ligands, kunye ne-neurodistribution". Iingxelo zeNew York Academy yeSayensi. 1163 (1): 154–68.